Oculus Rift: Facebook ayaa headset xaqiiqada dalwaddii halkan waa - Rule News
Oculus Rift: Facebook ayaa headset xaqiiqada dalwaddii halkan waa
Headset pre-amarada furan sida dadka isticmaala Twitter muujiyaan naxdin badan qiimaha
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Oculus Rift: Facebook ayaa headset xaqiiqada dalwaddii halkan waa - at qiimaha a” waxaa qoray Nicola Davis, waayo Observer on Sunday ayaa 10-kii January 2016 00.04 UTC
Universal Music Group - calaamadda in faanaa Taylor Swift, Justin Bieber iyo Madonna ay doona liis - ayaa shaaca ka qaaday, waxaa la isku kaashanayaa la iHeartMedia in "virtualise" waayo-aragnimo fanaanka ah, la hardware ee hadda diyaar u ah pre-si. khubaro Warshadaha waxay ku heshiiyeen: 2016 waxaa laga yaabaa in Sannaddii "xaqiiqada dalwaddii" yimaado jir.
Gadashada galay fikradda, Si kastaba ha ahaatee, waa SLT. At £ 499 for iibsada UK, ka Oculus Rift sanduuqa waxaa ka mid ah headset, shidma, kulan oo xukuma, halka bisha soo socota, waayo, $1,499 (£ 1,030), xirmo diyaar u noqon doona ka hor-si ka mid ah computer ah - aad laptop hore ma noqon waa arrin ilaa xawaaraha.
The tags qiimaha ka dhigay wareertay, iyadoo kuwa badan qaadan in Twitter si ay u muujiyaan in ay naxdin. Laakiin sida uu sheegay William McMaster, oo madax ka ah VR shirkadda ku salaysan London Visualise, sii daayo Oculus waa waqti ahmiyad sare. "Waa template ah waxa la gashto VR waxaa ay noqon doontaa sida mustaqbalka qof kasta,"Ayuu sheegay barbardhigay sii daayo oo ka mid ah computer horeysay Macintosh. Oo warbaahinta ku salaysan VR waxaa horay garaacid caadiga ah: shisheeya hurinayaan mawjad cusub oo kulan, fanaaniinta sida Björk ayaa si deg deg ah in ay qaataan technology waayo, videos music - Hubaal, September Taylor Swift iyo kooxda ku guuleystay abaalmarinta Emmy ah qurbaankoodii Amex Unstaged: The Experience Taylor Swift.
Bilash xaqiiqada Virtual yihiin wajiyo soo socda. "Waxa ay noqon doontaa qibrad cabsi badan si ay u awoodaan si ay u arkaan guuto aad runtii jecel ee Shiinaha, laakiin aad ku sugan tahay London, [ama] qeybsanaan ku xigeenka,"Ayuu yiri John Oswald, agaasimaha a at design iyo shirkad-abuurnimo Fjord. McMaster, ayaa aaminsan in ay tahay ugu horayn tahay inuu adopters hore kuwa doonaya inay qarash gareyso. "Ma qofka caadiga ah u socdaan in ay dibadda u baxaan, bixiyana £ 500 on headset VR ah iyo £ 1000 on PC ciyaaraha ah? Malaha ma,"Ayuu yidhi. Piers Harding-Rolls, agaasimaha kulan ee falanqeeye warshadaha HIS Technology, Oo Ogolaaday. "Daah-of iibgeysa, kuwaas oo sanadkan runtii ma aha oo ku saabsan suuqa mass,"Ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray in uu rajaynayo in isagana iyo ka go'an qalab-fiends in noqdo kan ugu horreeya inay miiska soo saaraan. "Waxaan qabaa inaan u leeyihiin in ay xaq ugu noqon macquul ah oo ku saabsan sida si deg deg ah waxa ay la ansixiyay,"Ayuu raaciyay. "Waayo, qalabka-dhamaadka sare waxaan rajeyneynaa, caalamka, ka yar saddex million in la iibiyo sanadkan guud ahaan qalabka oo dhan. "
Oculus Rift weli lama kaliya ee VR aragnimo macaamiisha ka filan karto si aad u hesho si ay u duuban la sannadkan: HTC ayaa lagu wadaa inuu bilowdo version ganacsi ee ay headset, Vive, ee April halka Sony ee PlayStation VR waxaa sidoo kale la qorsheeyay in la sii daayo in 2016. Waayo, kuwa la miisaaniyad hoose baakado Google iyo Gear VR labada, hawgal wadajir ah u dhexeeya Samsung Electronics oo Oculus, waa hore u heli karaa, isticmaalaya telefoonka si abuuray dunida dalwaddii. Laakiin, ayaa sheegay in, McMaster, Rift Oculus waa "sare ee khadka, sort of Ferrari "marka ay timaado la gashto VR. "Maxaa Rift Oculus samayn karaa sida gabal of technology waa wax headset a VR cheap samayn karay oo laba sano ka noqon doona,"Ayuu yidhi.
Oswald ayaa aaminsan in madadaalada waa uun bilowga ah fursadaha VR ee. "Waxa isgaarsiinta music a Ma? Waxaan qabaa in si dhab ah waa hab qoto dheer ka badan in,"Ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray in waxa laga yaabaa boon a marka ay timaado fahamka iyo cudur daaweynta. Qaar kale waxay, aad, rumaysan VR ayaa lagu wadaa in ay koraan. "Waxaan qabaa in sheeko film-qaadashada, iyo 360[-degree] video, waxa uu noqon doonaa mid aad u weyn,"Ayaa sheegay in McMaster, oo sidoo kale u arka advertising sida meel muhiim u ah technology. "Xidhiidhka waa mid ka mid kale weyn VR,"Ayuu raaciyay. "Taasi waa sababta Facebook iibsaday Oculus soo laabtay 2014 - Maxaa yeelay, sida madal isgaarsiinta a waa laga yaabo cajiib ah ".
← 10 dib cajiib Apple waa in ay tixgeliyaan for iPhone 7 Waxaan Just solan casriga a [VIDEO] →